एक बिरामीको पेटबाट डाक्टरले निकाले ४ इन्च लामा १२२ वटा फलामका किला ! « Khabarhub
एक बिरामीको पेटबाट डाक्टरले निकाले ४ इन्च लामा १२२ वटा फलामका किला !
एउटा किलाले मानिसको जीवनलाई मरण बनाइदिएका कैयौँ उदाहरणहरु छन् । तर इथियोपियामा एक ब्यक्तिको पेटबाट डाक्टरहरुले १२२ वटा किला उपचारका क्रममा निकालेका छन् ।
मानसिक रुपमा बिरामी रहेका ती व्यक्तिले निलेर पेटमा अड्किएका ती सबै काँटीहरु चिकित्सकले एकैसाथ पेट चिरेर बाहिर निकालेका हुन् । ३३ वर्षका ती व्यक्तिको पेटबाट ४ इन्च लामा फलामका १ सय २२ वटा किला, ४ वटा पिन, टुथपिक तथा काँचका टुक्राहरु समेत निकालिएको सेन्ट पिटर्स स्पेशलाइज्ड अस्पतालले जनाएको छ ।
पछिल्लो दुई वर्षदेखि उनले औषधि खान छाडेका कारण अवस्था बिग्रिएसँगै यो दुरावस्था निम्तिएको बताइएको छ । त्यतिधेरै वस्तुहरु पेटमा हुँदा पनि पेट नकाटिएका कारण उनले पुर्नजीवन पाएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७६, मंगलबार ५ : ३२ बजे